के हो मलमास ? पौराणिक कथा यस्तो रहेछ ! के के गर्नु हुँदैन मल मासमा ? अवश्य पढ्नुस | के हो मलमास ? पौराणिक कथा यस्तो रहेछ ! के के गर्नु हुँदैन मल मासमा ? अवश्य पढ्नुस – Laugh Nepal Nepal
के हो मलमास ? पौराणिक कथा यस्तो रहेछ ! के के गर्नु हुँदैन मल मासमा ? अवश्य पढ्नुस
laughnepal/ May 17, 2018
–अधिकमास लाग्नुअघि नगएका तीर्थमा यस महिनामा पहिलो पटक जान र दर्शन नगरेका देवताको दर्शन गर्नु शुभ मानिँदैन । –मलमासमा मन्दिर निर्माण गर्न तथा कुनै देवीदेवताको प्राणप्रतिष्ठा गर्न पनि शास्त्रीय निषेध छ । –विशेष कामनाले गरिने एकाह, सप्ताह, नवाह, लक्षहोम, कोटिहोम, श्रौतयाग, स्मार्तयागजस्ता कर्म अधिकमासमा गर्नु हुँदैन भनिएको छ । यद्यपि पुरुषोत्तम महात्म्य लगाउने भनेकै यही महिनामा हो र यसबाट मोक्षसम्म मिल्नसक्ने बताइएको छ ।
नव दम्पतीले के गर्नु हुँदैन मल मासमा ? –विवाह गरेको एक वर्ष पूरा नभएका पतिपत्नीबीच यौनसम्पर्क भए पतिको आयु क्षीण हुन्छ । यसको अर्थ पुराना दमपतीलाई चाहिँ छुट छ भनिएको होइन । –यो अवस्थामा समागम भएर गर्भ रहे सन्तान स्वस्थ जन्मँदैन । गर्भ रहेर बच्चा जन्मिए पनि आयु थोरै हुन्छ । –